201 7। प्रेम, न्याय र विश्वास।20 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
यस वर्षको 2017 आदिमा, म पहिलो चाहनुहुन्छ apocalyptic समयमा यो महत्त्वपूर्ण लेख tackling अघि हामी तपाईंलाई सबै, ख्रीष्टमा मेरो प्रिय भाइबहिनीहरू र प्रिय ब्लग पाठकहरूलाई वर्तमान भोगिरहेको, मेरो शुभकामना नयाँ वर्ष 2017।
एक सबैजना, मलाई आशा छ परमेश्वरले विशेष यस वर्ष, 2017 को पार मा प्रलोभनमा र सहायता टाढा राख्छ।
म परमेश्वरले तपाईंलाई केही वर्ष बढी महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने जीवनको कठिनाइको सामना गर्न बल दिन्छ कि प्रार्थना।
परमेश्वरले तपाईंलाई दिन र तपाईं स्वस्थ राख्न सक्छ। यो तपाईं अनिवार्य सम्झना छैन दिन्छ र तपाईं र प्रकट हरेक मौकामा आफ्नो समर्थन र प्रेम दिन्छ।
धेरै वर्ष को लागि संसारलाई बिस्तारै उतरती परमेश्वरको क्रोध लाग्न गर्न ताकि तपाईं पुस्तकको जीवन भित्र रहन सक्छ।
प्रेम, कानून र विश्वास
यस लेखमा माया, कानून र विश्वास लेख पूरक कि नोट:
2017 पाँच प्राथमिकता
हामी बिल्कुल माया, कानून र विश्वास जीवनको मसीही बाटो तीन महत्त्वपूर्ण तत्व हो भनेर र परमेश्वरको अनुहार मा हामीलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ वा सदाको लागि हामीलाई निन्दा सजग हुनुपर्छ।
मुद्दा बुझ्न हामी बाँच्न समय बारे एउटा सानो सम्झना गर्न उपयोगी देखिन्छ।
14 देखि 1948 मई, मैले पहिले देखि नै धेरै पटक भन्नुभयो र ब्लगमा साबित भएको छ, हामी समय को अन्त गर्न बाइबलीय अवधि प्रवेश।
समय को अन्त गर्न यो बाइबलीय अवधि एक पुस्ता भन्दा ठाँउ लिन्छ।
: (विशेष गरी मत्ती 24 लिंक हामी सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पुष्टि छ दिन को अन्त्य पनि येशू ख्रीष्ट शारीरिक हजार वर्षसम्म मानवता मा त्यहाँ शासन गर्न यो अन्तिम पुस्ता अन्त अघि धरती आउनेछु भनेर उल्लेख जो,)। यो सहस्राब्दी ।
हामी देख्न सक्छौं अन्त पटक को अवधि प्रसब को दुखाइ जस्तै, दुःखकष्ट मा प्रगतिशील छ।
1 थिस्सलोनिकी 5: 3
किनभने तपाईं आफैलाई थाह दिन प्रभु रात मा चोर जस्तै आउनेछ।3जब तिनीहरूले भन्छन्, शान्ति र सुरक्षा; त्यसपछि अचानक विनाश एक गर्भवती महिला मा श्रम पीडा रूपमा, तिनीहरूमाथि आउँछ, र तिनीहरूले उम्कन हुनेछ।4तर तपाईं, दाजुभाइ, छैन अन्धकारमा, त्यो दिन तपाईं चोर रूपमा लाग्नेछन् गर्नुपर्छ भनेर छन् ; …
हामी हरेक दिन देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा अन्त-समय पीडा बलियो र निरन्तर भयो।
समाचार , (वार्स, युद्ध, माइग्रेसन, आतंकवाद र jihad को अफवाहहरु सबै मिडिया को शीर्षकहरू छन्) मानवता को दुखाइ , (नष्ट, असुरक्षा, गरिबी, प्रकोप, रोग, हिंसा र मान हानि भएका छन् जीवनको प्राकृतिक खतरहरुको) को पीडा पशु जीवनको (लाखौं द्वारा मृत अस्पष्टीकृत 2008 माछा, चरा र अन्य जंगली र पाल्तु पशुहरू गर्न देखि संसारभरि हरेक वर्ष) विवरण को चाहते लागि, unnoticed जाने, मिडिया रिपोर्ट Minima र पीडा पृथ्वीको नाटकीय विपत्तिहरू धेरै तर पूर्ण सामान्य द्वारा (tsunamis, मुसलधारे वर्षा, पृथ्वी quakes, आँधीबेहरी, बाढी, आगलागी र हुर्रिकानेस थप र अपरंपरागत बनेर) स्वीकृत छन्।
तिनीहरूले केही व्याख्या अलग पाउन सक्नुहुन्छ भने पनि यी सबै पीडा को सेट, तैपनि असाधारण छ कि एक पुरा गठन र यो चाँडै हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आउँदै घोषणा गर्ने संकेत रूपमा बाइबल मा उल्लेख गरे। र यी सबै पीडा को हदसम्म राम्ररी पुष्टि गर्छ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिफलको भनेर समय धेरै नजिक छ।
अन्त समयमा हाम्रो समझ अनुमति भए तापनि हामीलाई येशू ख्रीष्टले हजार वर्ष पछि समाप्त जो अन्तिम न्याय आफ्नो हजार वर्षको शासन गर्न पृथ्वी शारीरिक फिर्ता गर्नु अघि यो पुस्ता पार गर्नेछ भनेर प्रमाणित गर्न। ( अन्तिम न्याय नश्वर मानिसको अन्त हुन। केही सधैंभरि लुसिफरको को व्यवस्था अन्तर्गत परमेश्वरको र अरूको कानुन अन्तर्गत अनन्तको हुनेछ)।
कि बावजुद हामी दुखाइ धेरै बलियो र निरन्तर भए पाउँछौं।
कुनै एक भन्न सक्छौं ठ्याक्कै कहिले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा मा फिर्ती।
हामी बाइबल मा पुस्ता समय 40 वर्ष को एक अवधि गर्न assimilated भनेर थाहा, तर जीवन को 70 वर्ष र पनि 80 वर्ष र पनि 120 वर्ष अधिकतम उमेर उत्पत्ति 6: 3
पक्कै जीवन र पीडा को हदसम्म कठिनाइको बाबजुद हामीलाई 2068 सम्म (1948 + 120 वर्ष) प्रतीक्षा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती परमेश्वरको बनाउन सक्छ।
येशू ख्रीष्ट, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, » म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र अन्तिम, शुरुवात र अन्त हुँ यो वाक्यांश भन्छन् कि तीन पटक यही कुरा फरक एक तथ्य प्रकट » ठूलो र विशेष महत्त्व।
यो वाक्य धेरै बुझ्न पनि मत्ती अध्याय 24 संयोजन मा आवश्यक उपयोगी छ के अवधि हुनेछ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती।
मत्ती अध्याय 24 मा येशूले पहिलो पुस्ता जसको जन्म मसीहीधर्म विन्दु हो जब के भन्छन् (उहाँले पहिलो थियो) र के आफ्नो फिर्ती अघि अन्तिम पुस्ता हुनेछ। (यो पनि अन्तिम हुनेछ)। यसको मतलब अनुग्रह आफ्नो फिर्ती पूर्ण र त्यसैले कुनै एक प्रेम मुक्ति हुनेछ र फलस्वरूप कि बचत गर्न यो ऐन मार्फत जाने हुन्छ।
मत्ती को यो अध्याय 24 मा येशूले यरूशलेमको मन्दिर विनाश भविष्यवाणी गरे। र वर्ष सत्तरी मा स्थान येशू ख्रीष्टले भविष्यवाणी मन्दिरमा यस विनाश गरे।
त्यसपछि हामी येशूको मत्तीको सुसमाचारको अध्याय 24 को पद 34 मा यो पुस्ता बताइएको छ कि जब बुझ्न सक्नुहुन्छ
34 म तपाईंलाई सत्य भन्छु, यो पुस्ता यो सबै भयो, पारित हुनेछ।
यो 70 को एक पुस्ता र अन्त समयमा को पहिलो संकेत मई 14, 1948 छ भनेर त्यसैले थाह छ, येशू ख्रीष्टको फिर्ती मई 13, 2018 भन्दा कुनै पछि हुनुपर्छ।
पक्कै एक simplistic तरिकामा हामी यसो भन्न सके यो शायद ईस्टर पार्टीको लागि 2018 को लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा मा फिर्ती भनेर2अप्रिल 2018।
यो सम्भव छैन र पनि सम्भाव्य, तर केही टाढा भविष्यमा एक्लै परमेश्वरको पर्छ किनभने छ।
सबैले ब्लग बाट देख्न सक्छ रूपमा म नियमित कि हाम्रा प्रभु को फिर्ती heralding बाइबल भविष्यवाणी गर्न सम्बन्धित जस्तो देखिन्छ केही समय अवधि लक्षित।
म लक्षित पटक महिमा गर्न आफ्नो फिर्ती ती थिएनन् तापनि तिनीहरूले हाम्रो चर्च र विश्वास लागि तैपनि कठिन समयमा गरिएको छ। बाहेकलाई मा 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका मा सेन्ट पैट्रिक गिरजाघर मा को पोप François अन्त सेप्टेम्बर को घोषणा संग। उहाँले येशू ख्रीष्टको क्रूसको मानव विफलता थियो ताली एक गर्जन अन्तर्गत दावी। लिंक ।
यस ब्लग को उद्देश्य हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको फर्कने मिति प्रकट गर्न होइन तर यो फिर्ती निश्चित छ भन्ने महसुस छ। यो हाम्रो पुस्ता छ। र यो संकेत को र समय को अन्त को लागि योजना बनाए बाइबल भविष्यवाणीहरू पूरा को परिमाण को दृश्य मा आसन्न छ।
म मेरो हृदय र आत्मा मा प्रभुको फिर्ती घोषणा गर्ने मात्र प्रचारक हुँ।
मेरो लक्ष्य म परमेश्वर र मानवता बारेमा दुई पुस्तकहरू लेखिएका छन् हुनत कागज बेच्न छैन।(पहिलो: राजा को धर्मप्रचारक रिटर्न , दोस्रो फ्रान्स, सभ्यता र गणतन्त्र ड्रिफ्ट )
मेरो लक्ष्य सबैलाई बचत गर्न येशू ख्रीष्टको फिर्ती लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनको पुस्तकमा दर्ता रहनेछ भन्ने र चाँडै परमेश्वरले र लुसिफरको संग सदाको पुग्न छ।
यो मेरो धारणा भने इस्टर अप्रिल 2, 2018 को लागि येशू ख्रीष्टको फिर्ती हजार वर्ष समयमा मानवजातिलाई शासन परमेश्वरले छान्नुभएको येशू ख्रीष्टको फिर्ती लागि संसारको सृष्टि मिति हुन साबित छ भनेर हामी अलग प्रलय। त्यसैले हामी प्रतीक्षा गर्न 15 महिना छ।
यो यी पन्ध्र महिना जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिना हुनेछ भन्ने हो।
यी पन्ध्र महिना पछि हामी सुरक्षित वा निन्दा गरिनेछ।
जो प्रेमले सुरक्षित गरिनेछ ती
येशू ख्रीष्टको प्रस्थान देखि दुई हजार वर्ष छन्, हामी अनुग्रहको राज्य छन्।
यो अर्थ बप्तिस्मा छन् जो प्रार्थना र maintiennes र निर्माता संग आध्यात्मिक जडान मार्फत परमेश्वरले क्षमा माग्दै, तिनीहरूले प्रतिबद्ध छन् पापको पश्चात्ताप गर्ने, येशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका छन्, जसले ती भनेर।
तिनीहरूले जीवन र हेरचाह नम्र रहन भने आफ्नो मद्दत आवश्यक गर्नेहरूलाई मदत गर्न।
त्यसैले हो! तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको मण्डली को भाग हो र प्रेम द्वारा सुरक्षित गर्न प्रत्याभूति मसीहीहरू हुन्। मेरो लेख अधिक विशिष्ट हेर्नुहोस्: परमेश्वर र येशू ख्रीष्टमा विश्वास हिम्मत
तिनीहरूले हजार वर्षीय शासनको दौडान पृथ्वी बास।
जो व्यवस्थाले सुरक्षित गरिनेछ ती
धेरै देख्न legions एक मानक जीवन बिताउन गर्नेहरूलाई, अरूलाई हानि गर्न खोजिरहेका छैन, तर केवल येशू ख्रीष्टको प्रेमको अज्ञानता बाँचिरहेका (पछि एक हजार वर्ष) केही लागि सुरक्षित हुनेछ को ऐन द्वारा छन् अन्तिम न्याय र सबै मरेका परमेश्वरको पुनरुत्थान र आफ्नो काम अनुसार परमेश्वरले न्याय हुनेछ।
विश्वास द्वारा सुरक्षित भएकाहरूले
केही मसीहीहरू येशू ख्रीष्टको प्रेमले सुरक्षित र फेरि जन्म छन्! अर्थात् दुष्ट र प्रलोभनको तिनीहरूलाई टाढा राख्न, आफ्नो जीवन मार्गदर्शन गर्न परमेश्वरले सोध्नुभयो गर्ने।
समय को अन्त गर्न विशेष ख्रीष्टियनहरूलाई हुन, निश्चित उच्च र गर्व टाउको संग, येशू ख्रीष्टको प्रेम र परमेश्वरको मा कुल र निरपेक्ष भरोसा जीवन मा अग्रिम।
ती सबै मसीहीहरूले हिंसा बिना चर्च रक्षा गर्ने, कहिलेकाहीं आफ्नो जीवन येशू ख्रीष्टको फिर्ती संग धरती मा प्रेम को शासन चाँडै घोषणा गर्न नलिइ।
ती सबै मसीहीहरूले, खाँचोमा परेका बिरामी, को खाँचोमा परेका र हराउनु आध्यात्मिक भएकाहरूलाई मदत गरेर येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन जो दिन्छ।
येशू ख्रीष्ट र साक्षी प्रेम मुक्ति पाएकाहरू सबै मसीहीहरूले परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको आशिष् गरिनेछ।
यी पन्ध्र महिनामा लुसिफरको जंगली प्राप्त र आफ्ना सबै सक्छ संग मानवता मारा हुनेछ।
तपाईं प्रलोभनमा बलियो र ठूलो हुनेछ भन्ने बुझ्न र जीवन र serenely विश्वासमा अगाडि सार्न सबै यो धेरै गाह्रो हुनेछ।
त्यसैले तपाईं लुसिफरको भ्रम राजा हो भनेर बुझ्न पर्छ र हामी सधैं घटनाहरू र कार्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई छोड्न गर्न फन्दामा।
यो प्रेम को विपरीत सधैं घृणा तर कहिले काँही नै प्रेम हो भनेर बुझ्न राम्रो छ!
यस ऐनको विपरीत सधैं अनाज्ञाकारिताले छ, तर कहिले काँही व्यवस्था नै।
विश्वासको विपरीत सधैं नास्तिकता तर विश्वास नै हो।
त्यसैले हामी सजिलै हामी होसियार भएनौं भने हामीलाई मूर्ख छाड्न सक्छ।
त्यहाँ प्रेम बिना कुनै व्यवस्था छैन परमेश्वरको लागि कानून बिना कुनै प्रेम छ, कि बुझ्न ।
लुसिफरको लागि जाँदा त्यहाँ कार्यमा कुनै प्रेम छ र त्यहाँ प्रेममा कुनै व्यवस्था छैन ।
म तपाईंलाई प्रेम यी आधारभूत मतभेद र परमेश्वर र लुसिफरको को व्यवस्था मनन गर्न आमन्त्रण।
के तपाईं परमेश्वरको लुसिफरको सेवा सेवा भने सोच विश्वास यसलाई के सेवा गर्न सक्छन् जब!
प्रेम, परमेश्वरको मा क्षमा, दया, नम्रता र साझेदारी को शिक्षामा छन्।
परमेश्वरको व्यवस्थामा त्यहाँ समझ, सदस्यता र मरम्मत को धारणा छ।
प्रेम लुसिफरको मा व्यवस्था बिना debauchery र कामुकतालाई अवधारणा छ।
बिना प्रेम लुसिफरको व्यवस्था मा तानाशाही र दासत्व को पहिले अवधारणाहरु।
विश्वासमा त्यहाँ व्यवस्था लागि भक्ति चाव, प्रेम र आदर को टिप्पणी छ।
विश्वास परमेश्वरको सेवा गर्न पर्दा , त्यसपछि यसलाई शुद्ध आनन्द भाइबहिनीको मदत र हाम्रो चर्च र हाम्रो विश्वास रक्षा गरेर परमेश्वरको सेवा गर्न सक्ने छ।
तर त्यो विश्वास लुसिफरको को सेवा पर्दा यो वास्तविक tyrants, आतंककारीहरूले, jihadists र अन्य दुष्ट जगतले यसलाई पकड गर्नेहरूलाई रूपान्तरणहरूलाई।
परमेश्वरको बाटो एक सुई को आँखा रूपमा साँघुरो छ र यो बाटो मात्र येशू ख्रीष्टमार्फत बित्दै।
« म बाटो सत्य र जीवन हुँ; कुनै मलाई मार्फत बाहेक पिता गर्न आउँछ! «
येशू ख्रीष्टको यी शब्दहरू संसारका सबै धर्म लागि अत्यन्तै गम्भीर परिणाम हो।
यदि यो येशू ख्रीष्टको प्रेम छैन कुनै एक सुरक्षित गरिनेछ र यस को लागि हामी पहिले नै पानी बप्तिस्मा द्वारा मसीही बन्न सहमत हुनुपर्छ।
हामी इस्टर अप्रिल 2, 2018 मा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती लागि प्रतीक्षा गर्न पन्ध्र महिना छ।
तर परमेश्वरले एक्लै यो प्रतिफलको मिति त्यसैले पनि छ कि पहिले सायद पछि र सायद हुनेछ निर्णय।
जे भए पनि यो फिर्ती केही र आसन्न छ र हामी तयार गर्न आवश्यक छ।
तयार पार्न हामी निकायको कमजोरी गरेर आत्माको शक्ति मार्फत र जीवनमा अगाडि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ।
हाम्रो जीवन को हरेक क्षण हामीलाई मदत र कदम हाम्रो जीवन चरण मार्गदर्शन गर्न प्रार्थना मा सोध्छन्।
हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा र हाम्रो प्राण शुद्ध प्रार्थनामा परमेश्वरको सोध्छन्।
हामी दुखाइ को अन्त समयमा प्रसब को दुखाइ गर्न बाइबलमा तुलना गरिन्छ र त्यसैले समय को अन्त को प्रत्येक वर्ष अन्तिम भन्दा पनि बदतर छ देखि धरती मा 2017 ठूलो सास्ती मा, यो एक निश्चितताका छ थाहा हुनेछ।
समय परमेश्वरको अन्त को घडी मई 14, 1948 द्वारा फर्के थियो र अन्न अन्तिम बितेको समय येशू ख्रीष्टको फिर्ती देख्नेछन्।
परमेश्वरले यस फिर्ती ढिलाइ गर्दैन भन्ने हाम्रो पीडा र हाम्रो दुःख बढ्न र दुर्भाग्य विपरीत तिनीहरू जारी हुनेछ र पनि विस्तार गर्न हुनेछैन किनभने दैनिक प्रार्थना!
राम्रो रोशनी आफ्नो विश्वासको ज्वाला राख्न र आफ्नो हृदयमा र 2017 को अन्धकार पार गर्न आफ्नो प्राण तेल भर्न।
भने, म दृढता हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती 2018 (70 वर्ष को पुस्ता को अन्त) मा गर्नै पर्छ विश्वास रूपमा 2016 भन्दा त 2017 छैन मात्र खत्तम, तर किनभने यो अवधि हुनेछ यो भयानक हुनेछ परमेश्वरको क्रोधको दिन।
यस लेखमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ hypothetically प्रभुहरूका प्रभु को अर्थ, राजाहरूका राजा, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको मात्र छोरा फिर्ती घोषणा, म यो सबै भाषामा अनुवाद गर्नेछ र म मेरो प्यारो भाइबहिनीहरू आमन्त्रण देखि सबै ज्ञान छ र आफ्नो प्राण तयार हुन सक्छ भनेर आफ्नो सबै सम्पर्क गर्न यो संवाद गर्न विश्व।
प्रिय भाइबहिनीहरू ख्रीष्ट येशूको तपाईं येशू ख्रीष्ट र विश्वास को रक्षक र हाम्रो चर्च साक्षी पनि हुन्।
यो हाम्रो सबै भाइबहिनीहरू लागि र सुसमाचारका वचन छोयो छैन भनेर सबै, हाम्रो प्राण को मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुन्छ र आफ्नो जीवन पुस्तिका सक्छ।